Shan Qodob Ka Ogow Dekedda La Balaadhiyay Ee Berbera | Gaaroodi News
Shan Qodob Ka Ogow Dekedda La Balaadhiyay Ee Berbera
June 24, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Sawirka guud ee dekedda Berbera
Waxaa maanta la daahfuray wejigii koobaad ee ballaadhinta dekedda Berbera, taas oo ay gacanta ku haysay shirkadda laga leeyahay Imaaraadka ee DP World. Waxaana xafladda furitaanka ka qaybgelaya wufuud kala duwan oo ka kala yimi, Itoobbiya, Imaaraadka, Kenya iyo meelo kaleba.
Dhanka Somaliland-na waxaa goobta ku sugan wefdi uu hoggaamimanyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Heshiiska dekedda Berbera ee DP World ayaa abuuray muran fara badan waagii la hirgelinayey.
‘Maanta waxaa magaalada Berbera ka dhacay xaflad aad u ballaadhan oo xadhigga lagaga jararyey wejigii koobaad ee ballaadhita dekedda Berbera, oo ah dekeddii hore oo lagu daray 400 mitir oo deked cusub ah” ayuu BBC-da u sheegay Agaasimaha Madaxtooyada Somaliland Maamed Cali Bile.
Waxaana lacagta mashruucan ku baxday lagu sheegay ku dhawaad 500 milyan oo doollar.
Halka waxaan ku eegaynaa afar qodob oo ku gedaaman furitaanka mashruucan iyo guud ahaanba heshiiska dekedda Berbera iyo DP World.
Maxaa lagu kordhiyay
Waxaana ay markiiba xammili karaa 500 oo koonteynaro cabbirkoodu yahay TEU.
Qorshuhu wuxuu yahay in la gaadhsiiyo illaa 2 milyan oo TEU
Waxaa lagaa dhigayaa goob uu ku soo hirto ganacsiga geeska Afrika.
Waxaa lagu soo kordhiyey 8 wiish oo kuwa gashaaman ah
Waaa lagu dhawaaqay wejigii labaad ee dekedda Berbera
Deked cusub ayaa iyana diyaar ahaan doonta saddexda sano ee soo socota oo la dhisi doono.
Maxay tahay DP World?
DP World, waxa ay u taagan tahay Dubai Ports World oo ah mid ka mid shirkada xuduudaha ka gudbay oo laga leeyahay dalka Imaaraadka oo ka shaqaysaa dekadaha, keenista iyo qaadista badeedcadaha.
Inkasta oo ay xilli hore la soo bilaabatay haddana goortii si rasmi ah uu ugu baxay magaca DP World ayna u gudubtay shirkad weyn oo dhaafsiisan dalka Imaaraadka waxa ay ahayd 2005-tii .
Sultan Ahmed Bin Sulayem ayaa ah madaxa ugu sarreeya shirkaddaas. Waxaana ay heshiisyo kula jirtaa dhanka dekedaha ah dalal badan oo caalamka ah oo gaadhsiisan illaa 60 dal.
Waxaana ay hore u soo maamushay dekedda dalka Jabbuuti, ka hor intii aanay dawladda Jabbuuti aysan kala noqon heshiishkii ay kula jirtay. Golaha wakiilada Somaliland oo ayiday heshiiskii dekada Berbera ee lala galay DP World iyo Itoobiya
Heshiishka Dekedda Berbera iyo sida uu ku soo billaabmay?
Heshiiska DP World ee dekedda Berbera ee ay la gashay Somaliland wuxuu soo bilaabmay 2 016-kii, xilligaas oo golaha wakiiladda Somaliland ay ansixiyeen taariikhda markii ay ahayd 9-kii bishii Agoosto, 2016-kii. Maalinkii ansixinta waxaa isqabqabsi gaadhay gacan ka ahdal uu ka dhacay baarlamaanka Somaliland.
Mucaaradka ayaa ka soo horjeestay heshiiskaas.
Heshiiskaas ayaa dhigayey in shirkadda DP World ay saamiga dekadda yeelanayso 51% boqolkiiba, Somaliland-na ay yeelayanayso 30% boqolkiiba, halka dowladda Itoobiya ay qaadatay boqolkiiba 19%, heshiiskana waxa uu soconayaa muddo 30 sanadood ah.
Waxaana mashruucan qayb ka ahaa Berbera Corridor oo isku xidhaysa Berbera iyo Wajaale oo iyana qaybtii u badnayd la dhammaystiray.
Falcelintii dowladda Federaal
Kadib dadaalo ay dowladda Soomaaliya u gashay sidii ay isu hortaagi lahayd heshiiska, kuwaas oo aanan midhodhalin, wasiiradda dekadaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Maryan Aweys waxa 2-dii bisha March, 2018-ka ay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in heshiiskaas yahay mid sharci darro ah, islamarkaasna aanan la aqbali karin.
Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre oo maalintaas ka soo laabtay safar uu ku joogay Imaaraatka Carabta ayaa isaga oo ay hareer taagantahay wasiiradda ku celiyay hadalkii wasaaradda, sheegeyna heshiiska uu xad gudub ku yahay ‘qaranimadda Soomaaliya’, aysan jiri karin shirkad shisheeye oo dalka heshiis ka gali karta iyada oo aysan ka warhaynin dowladda federaalka.
Hadalkaas waxaa ku celiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu furayay kalfadhiga labada aqal, isaga oo aanan carrabka ku dhufan Berbera iyo DP World toona, ayuu yiri “Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto waddamada caalamka, si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa in ay maalgashato Soomaaliya waa in ay ogolaansho rasmi ah ka hesho hay’adaha dastuurida ah ee dowladda federaalka, waxaan uga digayaa in waddamada iyo shirkadaha shisheeye in aysan ku xad gudbin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed”.
Markii uu baarlamaanka furmay, ajandihii koowaad ee laga dooday, loona codeeyay waxa uu ahaa heshiiska Berbera, waxayna natiijada noqotay in baarlamaanka uu shirkadda DP World ka mamnuuco in ay ka hawlgasho Soomaaliya, heshiisyadii au gashayna wuxuu kasoo qaaday kuwa aanan jirin
Saamiga Itoobiya ee heshiiskaas
“Dhinaca Itoobiya, markasta si qaldan ayaa loogu celceliyaa, dadka in ay wax fahmaan ayaa fiican, DP World iyo Somaliland ayaa heshiiska wada galay, kadibna DP World ayaa saamigeedii ka gadday Itoobiya, marka labada dhinac ee jira ee asal ahaan heshiiyay waa Somaliland iyo DP World, haddii markaas DP World uu heshiiskeeda sharci noqdo, markaas ayuu kan Itoobiyana sharci noqonayaa, haddii uusan noqon waayana Itoobiya jid u furan maba lahan” ayuu yiri Abukaate Sakariye Cabdullaahi oo ah falanqeeye siyaasadeed oo Geeska Afrika darsa.
Dhanka kale DP World iyo Wasaaradda Gaadiidka ee Itoobiya waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo loogu magacdaray (MoU) bishii May ee sannadkan, ujeeddadiisuna ahayd horumarinta dhinaca Itoobiya ee waddada isku xidha Addis Ababa iyo Berbera, oo ka mid noqon doonta marinnada waaweyn ee ganacsiga iyo saadka ee dalkaas